Afrika waa halka ay ka bilaabantay Ilbaxnimada iyo Maalinta Dalxiiska Adduunka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » News » Afrika waa halka ay ka bilaabantay Ilbaxnimada iyo Maalinta Dalxiiska Adduunka
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Eswatini Breaking News • Wararka Dowladda • News • Dadka • Dalxiiska • Daalacanayo Hadda
Shabakadda Dalxiiska Adduunka oo ay weheliyaan Guddiga Dalxiiska ee Afrika ayaa ku biiray UNWTO maanta si loogu dabaaldego Maalinta Dalxiiska Adduunka.
Sebtember 27, 2021 waxay ahayd maalin la iloobo khilaafaadka, caqabadaha iyo COVID-19.
Dalxiisku waa mid loo wada dhan yahay wuxuuna ku guulaysan doonaa xitaa si ka sii fiican oo ka caqli badan marka lala qabsado deegaanka COVID-19.
Maalinta Dalxiiska Adduunka waxaa lagu aasaasay fadhigii saddexaad ee UNWTO ee Torremolinos, Spain 17 -kii Sebtembar, 1979 -kii oo uu sameeyay nin reer Nigeria ah oo la yiraahdo IGNATIUS AMADUWA ATIGBI.
Marxuum Ignatius Amaduwa Atigbi, oo u dhashay dalka Nigeria, ayaa ahaa kii soo jeediyay fikradda ah in 27 -ka Sebtembar ee sannad walba loo asteeyo Maalinta Dalxiiska Adduunka, waana sababta ay dadku ugu yeeraan “Mr. Maalinta Dalxiiska Adduunka ”.
Guddiga Dalxiiska Afrika ayaa maanta u dabaaldagay Maalinta Dalxiiska Adduunka dhammaan Afrika iyo adduunka oo dhan. Waxay ahayd maalin madadaalo leh, iyo maalin la iloobo COVID-19
Mooshinka lagu daahfurayo Maalinta Dalxiiska Adduunka waxaa kor u qaaday Mr. Ignatius Amaduwa Atigbi oo ka tirsan UNWTO sannadkii 1979. Wuxuu ahaa Agaasimihii ugu horreeyay ee ugu horreeyey ee Shirkadda Horumarinta Dalxiiska ee Nigeria (NTDC), ka dibna loo yaqaan Ururka Dalxiisayaasha Nigeria (NTA), Wuxuu kaloo ahaa Guddoomiyaha Guddiga Socdaalka Afrika (ATC).
In 1980, ka Ururka Dalxiiska Adduunka ee Qaramada Midoobay Waxaa loo dabbaaldegay Maalinta Dalxiiska Adduunka iyada oo loo dabbaaldego caalamiga ah 27 -ka Sebtembar. Qaadashada Xeerarkan waxaa loo tixgeliyaa inay tahay mid muhiim u ah dalxiiska caalamka. Ujeedada maalintan ayaa ah in kor loo qaado wacyiga doorka dalxiiska ee beesha caalamka dhexdeeda iyo in la muujiyo sida ay u saameyso qiyamka bulshada, dhaqanka, siyaasadda iyo dhaqaalaha adduunka oo dhan.
Ignatius Amaduwa Atigbi sanadkii 1979 - Mr. Maalinta Dalxiiska Adduunka
Wuxuu dhintay isagoo jira 68 sano December 22,, 1998 waxaana lagu aasay magaaladii uu ku dhashay ee Koko ee gobolka Delta.
Maanta Maalinta Dalxiiska Adduunka ayaa laga xusay Afrika iyo daafaha caalamka.
Dad badan, tani waxay ahayd maalin laga nasto welwelka COVID-19 iyo dhaawaca masiibadaani u geysatay safarka iyo warshadaha dalxiiska adduunka oo dhan.
Cuthbert Ncube, Gudoomiyaha Dalxiiska Afrika ayaa sidaa yiri eTurboNews:
“Waxaan ku xusayay Maalinta Dalxiiska Adduunka hoosteeda cirka Afrika Boqortooyada Buuraha ee Eswatini. Waxaa ila joogay Danjiraha Brand ATB Mr Sandile oo ka tirsan Dalxiiska Koonfur Afrika,
Eswatini waa hoyga cusub ee Guddiga Dalxiiska Afrika.
Guddoomiyaha ATB oo faraxsan oo ku raaxaysanaya Eswatini Maalinta Dalxiiska Adduunka
“Inta badan Afrika waxay hadda u furan tahay Booqdayaasha Caalamiga ah inay yimaadaan oo sahamiyaan kala duwanaanshaheena xagga Dhaqanka, fursadahayaga weyn ee maalgashiga maadaama aan qirayno saamaynta iyo ka qayb qaadashada Dalxiiska xagga kobaca iyo joogtaynta abuurista shaqooyinka.
Waxaan u baahanahay inaan wadar ahaan ku biirino adduunka oo dhan si aan u simno dhulka oo aan la simin oo Afrika iyada oo bixinnadeeda kala duwan ay kaalin muhiim ah ka qaadatay wax ku biirinta GDP -ga adduunka.
Bulshooyinkeenu waa inay ka faa'iideystaan ​​qaar ka mid ah qashin-qubka sidaas darteed maadaama aan u dabbaaldegeynno maalintaan Afrika waa inay diiradda saarto hirgelinta muhiimka ah ee dalxiiska gudaha iyo bulshada oo saldhig u ah dhaqaajinta joogtada ah ee dhaqaalaheena Dalxiiska.
Kuma filna in loo kaxeeyo dabbaaldegga maalintan, maaddaama oo in badan oo ka mid ah bulshooyinkeennu ay ku nool yihiin saboolnimo. Waxaan u baahanahay inaan ku dhaqaaqno hab dhammaystiran oo aan ku qaddarineyno silsiladda qiimaha dalxiiska ee ka faa'iideysata ilaaliyayaasha dhaxalkayaga. ”
eTurboNews wuxuu ka helay jawaabo dalal badan oo Afrikaan ah, oo ay ku jirto Angola:
Safiirka ATB: Kuyanga Diamantino: WTD, oo ka socda Angola. Waxaan aaminsanahay dib u soo kabashada guud, waxaan aaminsanahay dadaallada Waaxda Dadweynaha iyo kuwa Gaarka loo leeyahay si loo dhiso Goob Dalxiis oo Afrikaan ah oo xooggan. Waxaan aaminsanahay Horumarinta Afrika iyada oo loo marayo HORUMARKA DALXIISKA SUSTAINABLE